နော့ဝှစ် တို့ အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ အောက်ဆုံးနေရာမှာ ရောက်နေတဲ့ အကြောင်းရင်းကို သုံးသပ် သွားခဲ့တဲ့ လီဗာပူးမန်နေဂျာ ယာဂန်ကလော့
ယာဂန်ကလော့ဟာ ယနေ့ည ကာရိုးရုတ် မှာ နော့ဝှစ် နဲ့ မကစားမီ ပြိုင်ဘက် အသင်းနဲ့ မန်နေဂျာ ဒန်နီရယ်ဖာကာ တို့ကို လေးစားမှု ပြသ သွားခဲ့ပြီး နော့ဝှစ်တို့ အမှတ်ပေးဇယားရဲ့ အောက်ဆုံး နေရာမှာ ဘာကြောင့် ရောက်နေတာလဲ ဆိုတဲ့ အကြောင်းရင်းတွေကိုလည်း သုံးသပ် သွားခဲ့ ပါတယ်။ လီဗာပူးဟာ ပရီးမီးယားလိဂ် က ပထမဦးဆုံး ပေးခဲ့တဲ့ mid-season break အပြီး ဇယားအောက်ခြေ က နော့ဝှစ်နဲ့ စတင် ကစား သွားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
မနေ့ညက သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲ မှာတော့ သတင်းထောက် တစ်ဦးက နော့ဝှစ်ဟာ ရာသီအဖွင့် ပွဲစဉ်တုန်းက အန်ဖီးမှာ လီဗာပူး ကို ၄-၁ နဲ့ ရှုံးခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ် အပါအဝင် ဒီရာသီ ပွဲစဉ် အများစုမှာ ကောင်းမွန်တဲ့ တိုက်စစ် ကစားပုံတွေကို ပြသ နိုင်ခဲ့ပေမယ့် ယခုလို ဇယားအောက်ခြေကို ရောက်နေတာကို အံ့သြ မိသလား? ဆိုပြီး ကလော့ ကို မေးမြန်း ခဲ့ပါတယ်။
ကလော့ က “ဒါဟာ အံ့သြစရာလား? ကျွန်တော့် ဘက်ကတော့ သိပ်မသေချာ ပါဘူး။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ ဒီလိဂ်ဟာ အရမ်းကို တောင့်တင်းတာကြောင့် ဒီလိုမျိုး ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် တကယ် နှစ်သက် တာကတော့ သူတို့ဟာ ကိုယ့်ရဲ့ မူအတိုင်း တစ်စိုက်မတ်မတ် သွားနေတာကိုပါ။ ရာသီအဖွင့် ပွဲစဉ်က ကျွန်တော်တို့နဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်ဟာ နော့ဝှစ်ရဲ့ ရာသီတစ်ခုလုံး အတွက် ဥပမာ တစ်ခုပဲလို့ ကျွန်တော် ထင်ပါတယ်။
တကယ်ကောင်းတဲ့ ကစားဟန် ၊ အကောင်းဆုံး ညွှန်ကြားမှု နဲ့ ကွင်းထဲမှာ သူတို့ရဲ့ pattern တွေ ၊ လေ့ကျင့်ရေးကွင်းက ရွေ့လျားမှုတွေ ကို မြင်ရပါတယ်။ သူတို့ဟာ အရမ်းကို ယုံကြည်မှု ရှိတဲ့ အပြင် ပထမပိုင်းမှာ ၄ ဂိုး ပေးထား ခဲ့ရပေမယ့် လုံး၀ အရှုံး မပေးခဲ့ပါဘူး။ အဲဒီပွဲမှာ သူတို့ ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ အခွင့်အရေးတွေ ပိုရခဲ့တယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကတော့ ဂိုးပိုသွင်း ခဲ့တာပေါ့ဗျာ။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ဒီရာသီ သူတို့ ဘာလို့ ဒီလို ဖြစ်နေသလဲ ဆိုတဲ့ အကောင်းဆုံး ဥပမာ ပါပဲ။
သူတို့ဟာ ဒီရာသီ ကစားခဲ့တဲ့ အသင်းတွေ အားလုံးရဲ့ ၉၅% ကို တကယ့်ကို ပြသနာပေး ခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နောက်ဆုံးမှာ သူတို့ဟာ ဒီလိုပွဲ အများစု ကို ရှုံးခဲ့ ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့်လည်း သူတို့ ဒီလို အခြေအနေမှာ ရှိနေတာပါ။ ကျွန်တော် အပြင် ကနေ နားလည်ရသလောက် ကတော့ ဒီကလပ်ဟာ မူဝါဒအတိုင်း အတူ သွားကြတယ် ၊ သူတို့ရဲ့ အခြေအနေ ဘယ်လိုရှိသလဲ ဆိုတာ သိတယ် ၊ သူတို့ ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတာ သိတယ်။ သူတို့ဟာ…ကျွန်တော် ပြောတာ နည်းနည်းတော့ ထူးဆန်း နေနိုင်ပါတယ်…တကယ် ကောင်းတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေပါတယ်။ ကလပ်ဟာ ကောင်းမွန်တဲ့ အခိုက်အတန့်မှာ ရှိပါတယ်။
အမှန်ပါပဲ။ သူတို့ ပရီးမီးယားလိဂ် မှာ ဆက်ရှိချင် ကြပါတယ်။ ဒါဟာ ဖြစ်နိုင် ပါသေးတယ်။ ခက်ခဲပေမယ့် ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ သူတို့ဟာ ဆောင်းရာသီ အပြောင်းအရွေ့ ဈေးကွက်မှာ လှုပ်ရှားခဲ့ပြီး လာမည့် ရာသီအတွက် ပြင်ဆင် ထားပြီးပါပြီ။ သူတို့ တောင့်တင်းတဲ့ အသင်း ထပ်ဖြစ်လာမှာပါ။ အခု ဒန်နီရယ်ဖာကာ ကို ဘယ်သူက မေးခွန်းထုတ်နေကြလို့လဲ။ ဘာလို့လဲ ဆိုတော့ သူအကောင်းဆုံး လုပ်နေလို့ပါ။
ရလဒ် တည်ငြိမ်မှု အချို့တော့ လိုအပ်နေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်အနည်းငယ် အတွင်း ဒါဟာ နော့ဝှစ်အတွက် ပြသနာနည်းနည်း ဖြစ်နေ ပါတယ်။ ကျွန်တော် သေချာတော့ မသိပါဘူး။ ဒါဟာ အရမ်း အရေးပါပါတယ်။ မိန့်ဇ် မှာတုန်းကလည်း ကျွန်တော် ဒီလို ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ကစားတာတွေ ကောင်းခဲ့ပေမယ့် တစ်ချိန်မှာ အဲဒီလိဂ်မှာ ဆက်ပြီး မရပ်တည် နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ဘွန်ဒက်လီဂါကို ပြန်လာဖို့ ရလဒ်ပိုင်း တည်ငြိမ်မှု အနည်းငယ် လိုခဲ့ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒါဟာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အားလုံးဟာ မနက်ဖြန် အတွက် plan ဆိုတာ လိုအပ်ပါတယ်။ ပြီးတော့ နောက်လ အတွက် ၊ နောက်နှစ် အနည်းငယ် အတွက် plan တွေလည်း လိုအပ်ပါတယ်။ သူတို့မှာ ဒါတွေ ရှိနေတဲ့ ပုံပါပဲ။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော် အများကြီး လေးစားပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ထပ်ပြီး ပြောရမယ် ဆိုရင် ကျွန်တော်တို့ ၄ ဂိုးရချိန်မှာ သူတို့ ၁ ဂိုးပဲ ပြန်သွင်း ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ သူတို့ ကြုံနေရတဲ့ ပြသနာတွေ ထဲက တစ်ခုပါပဲ။ ဒါပေမယ့် အဲဒီပွဲတုန်းက သူတို့ဟာ အခွင့်အရေးတွေ ပိုရခဲ့ ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ ဒါကိုတွေးထား ရမှာပါ။
ကျွန်တော်တို့ အတွက် တကယ်ကောင်းတဲ့ သတိပေးချက် ၊ တကယ်ကောင်းတဲ့ စတင်မှု ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ ရာသီအစပိုင်းမှာ ကျွန်တော်တို့ဟာ တည်ငြိမ်မှု သိပ်မရှိ ခဲ့ပါဘူး။ ကျွန်တော်တို့ ပထမပိုင်း မှာကတည်းက ၄-၀ နဲ့ နိုင်နေခဲ့ပြီး စောစောစီးစီး ပွဲကို ပြီးသွားပြီလို့ ယူဆ ခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ ခက်ခဲတဲ့ အခြေအနေ ဖြစ်ပြီး လမ်းကြောင်းမှာပေါ်ကို ဦးတည်စေပါတယ်။ ကြံ့ခိုင်မှု မပြည့်သေးတာတွေ ၊ ပူးပေါင်းမှုတွေ သိပ်မကြာသေးတာကြောင့် ကျွန်တော်တို့ ဒုတိယပိုင်းမှာ နည်းနည်း ရုန်းခဲ့ ရပါတယ်။ ဒါဟာ လုံး၀ အိုကေပါတယ်။ အခု နှစ်သင်းစလုံးဟာ ခြားနားတဲ့ အခြေအနေမှာ ရှိနေပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ နော့ဝှစ်ရဲ့ အရည်အသွေးကို ခံစား မိပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျွန်တော်တို့ရဲ့ အရည်အသွေးကိုလည်း သူတို့ ခံစားမိအောင် သေချာ လုပ်သွားရမှာပါ။” လို့ ဆိုသွား ပါတယ်။